k3x: interface eserese k3d maka ijikwa Kubernetes | Site na Linux
k3x: interface eserese k3d maka ijikwa Kubernetes
Maka ndị na-arụ ọrụ na Kubernetes ngwa ndị a nwere ike ịmasị gị, dị ka ọtụtụ ndị na-eji k3d akpa n'ihi na ọ dị fechaa iji na-agba ọsọ k3s (nkesa Kubernetes kacha nta nke Rancher Lab). k3d na - eme ka ọ dị mfe ịmepụta otu ụyọkọ ma ọ bụ ọtụtụ ọnụ k3s ụyọkọ na docker, dịka ọmụmaatụ maka mmepe mpaghara na Kubernetes.
Na nke a k3x bụ atụmatụ magburu onwe ya iji jikwaa k3d site na njirimara ọrụ njirimara, ya mere inwe ụyọkọ Kubernetes nke gị dị obere.
Na ebe oru ngo, A kọwara k3x dị ka nke zuru oke maka:
Nwee ụyọkọ Kubernetes ọhụrụ na sekọnd ole na ole.
Nwalee mmejuputa ohuru tupu imeputa ihe.
Mụta maka Kubernetes.
Ọzọkwa, ọ na-ekwu banyere nke ahụ Ebumnuche k3x bụ:
Iji mepụta, gbanwee, na / ma ọ bụ hichapụ ụyọkọ Kubernetes.
Iji bulie arụmọrụ ndị kachasị mkpa site na iji ụzọ mkpirisi keyboard ụwa.
Iji belata usoro mmụta nke iji Kubernetes.
1 Etu esi etinye k3x na Linux?
1.1 Esi ewepu k3x Kubernetes Manager na Linux?
Etu esi etinye k3x na Linux?
Maka ndị nwere mmasị ịwụnye k3x na sistemụ ha, ha nwere ike ime ya site na enyemaka nke ngwugwu Flatpak, ya mere, ha gha inwe nkwado maka ụdị nchịkọta ndị agbakwunyere na sistemụ ha.
Ugbua site na nkwado agbakwunyere, dị nnọọ tinye Flathub repository (ọ bụrụ na ịnweghị) ma ọ bụ ọ bụrụ na inweela ya, ị nwere ike ịwụli usoro a.
Addgbakwunye nkwụnye ego ị ga-emepe ọnụ na sistemụ gị ma n'ime ya ka ị ga pịnye iwu na-esonụ:
Na ịwụnye k3x na sistemụ ahụ,, ị nwere ike iwunye ngwugwu ahụ ozugbo site na Flathub site na iji kọmputa ede iwu na-eso na ọnụ ya:
Ma ọ bụ ha nwekwara ike ịhọrọ ibudata ngwugwu ahụ na iwu a:
Gaa n'ihu ịwụnye ngwugwu idobere onwe gị na folda ebe ha budatara (nke ọ bụrụ na ha akwabeghị mgbe ị na-eme iwu gara aga) site na ịpị iwu na-esonụ:
Y ma ọ bụrụ na ha nwere njehie na-esonụ "Ngwa com.github.inercia.k3x / x86_64 / ukwu chọrọ ihe na-agba ọsọ oge org.gnome.Platform / x86_64 / 3.3 nke ahụghị ”.
Ha nwere ike ịmanye nrụnye nke ịdabere na:
Ozugbo echichi na-eme, ha nwere ike ijide n'aka na arụnyere k3x na sistemụ gị ma ha nwere ike ịchọpụta nke a, ebe ọ bụ na ha ga-amata na onye na-ebupụta mmiri dị na menu ngwa ha.
Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ha achọtaghị ya ma ọ bụ na ọ bụghị, Nwere ike ịmalite k3x ozugbo na ọnụ gị site na ịme iwu na-esonụ:
Ozugbo k3x na-agba ọsọ, ha ga-ahụ akara ngosi ọhụụ na tray sistemụ nke ga-egosipụta menu mgbe ịpịrị.
Na menu a ha ga-enwe ike ịhụ ihe dị iche iche ha nwere ike ime ozugbo, ma e wezụga na ọ na-enyere ụfọdụ keyboard czọ mkpirisi ịrụ omume. (enwere ike ihu ha na Uzo Uzo Uzo)
Ọzọkwa, imepụta ụyọkọ ọhụrụ na-enye gị ohere ịkekọta ụyọkọ aha, ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ na ụyọkọ ahụ, na k3d ga-amalite site na ọnụ ọnụ nna ukwu nke a ga-ejikwa rụọ ọrụ ahụ, mana enwere ike ịgbakwunye ndị ọrụ ọzọ.
A na-ahapụkwa njikwa ụyọkọ na ndekọ mpaghara ebe a na-ahazi nkọwa ndekọ mpaghara dị na Mmasị Mmasị.
Okwesiri iburu n’obi na edere ihe edere aha obodo n’etiti ndi mmadu nile. A ga-ebute ihe okike mgbe ị mepụtara ụyọkọ mbụ nke chọrọ ya, a ga-ewepụ ya mgbe ụyọkọ anaghịzi eji ya.
Esi ewepu k3x Kubernetes Manager na Linux?
Maka ndị chọrọ iwepụ k3x Kubernete Manager na sistemụ ha, ha ga-enwe ike ime ya n'ụzọ dị mfe na ọ bụ na ha ga-emeghe ọnụ na ya ha ga-pịnye otu n'ime iwu ndị a iji kpochapụ ngwa ahụ na sistemụ ha kpamkpam.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » k3x: interface eserese k3d maka ijikwa Kubernetes
A tọhapụrụ Ubuntu LTS mbipute 20.04.1, 18.04.5 na 16.04.7